Maqaallada Matt Chandler ee Martech Zone |
Maqaallada by Matt Chandler
Talaado, Nofeembar 15, 2011 Isniin, November 14, 2011 Matt Chandler
Ii wac wax soo saar ka mid ah waxbarashada farshaxanka deeqsi ah, laakiin waxaan si adag u aaminsanahay qofka aragtidiisa adduunka in lagu wargeliyo ilo iyo khibrado badan intii suurtogal ah. Akhrinta buugii ugu dambeeyay ee khabiir ku takhasusay cilmigaaga waa wax weyn. Isticmaalka qoraallo badan oo maqaallo ah iyo maqaallo warar ah sida aad uga faa'iideysan karto warshadahaaga ayaa waxtar leh. Kaqeybgalka shirarka iyo fadhiisinta bandhigyada si aad usii horumariso xirfaddaada waa lagugula talinayaa. Laakiin sidoo kale waa muhiim inaad eegto banaanka wareegga caadiga ah
Qiyaastii saddex meelood laba meelood oo fasalkayga ah weligood ma isticmaalin ama xitaa ma eegin Twitter. Qaar badan oo ka mid ah xitaa ma aysan ogeyn waxa ay ahayd ama waxa loogu talagalay.
Monday, August 23, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Matt Chandler
Iyada oo adeegyo badan ay u tartamayaan dareenkeenna, iyo in badan oo shabakadaha internetka ah si loo xakameeyo, da'da isticmaalka hal gabal oo softiweer ah si loo gaaro hal ujeedo gaar ah ayaa u dhimatay sida Dillinger. Markaan nahay suuqleyda waxaa nalaga filayaa inaan gudoomino xayeysiinta Facebook, raadinta lacag bixinta, SEO, Twitter, baloogyada, faallooyinka, wada hadalada… liistada ayaa socota.
Talaado, July 6, 2010 Arbacada, Nofeembar 5, 2014 Matt Chandler
Soo koobida waxyaabaha ayaa dejinaya lakab tifaftiran oo ku saabsan gudbinta wararka iyo macluumaadka kale. Tifatirayaasha aadanaha waxay soo xushaan sheekooyinka adeegsadayaashoodu "u baahan yihiin" inay ogaadaan, taas bedelkeed inay ku fatahaan iyaga oo adeegsada qaab algorithm ahaan loo xushay adeegsadayaashoodu ay "rabaan" inay ogaadaan
Google, oo horseed u ah bixiyaha raadinta iyo hooyada ka dambeysa caanka ah taraafikada webka Google Analytics Analytics qalab, ayaa u oggolaan doonta dadka isticmaala inay ka fogaadaan in lala socdo qalabkooda.
Qorsheynta Qorsheynta Warbaahinta Bulshada
Isniin, Maarso 8, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Matt Chandler
Markaad iskudareyso nuxur iyo istiraatiijiyad warbaahin bulsheed, howsha kaliya ee ugu muhiimsan ayaa ah inaad dejiso barnaamijyada iyo adeegyada ugu faa'iido badan baahidaada.
Feejignaanta faahfaahinta iyo socodka joogtada ah ee isgaarsiinta ayaa muhiim u ah shirkad kasta oo weyn ama yar. Khalad khaldan oo ka dhasha qalad qaab qoraal ah ayaa yeelan kara ciqaabo fog.